तपाईँको स्मार्ट फोन तात्यो ? यसो गर्नुहोस् - Nepali Online News Media-shikharnews.com
काठमाडौं, २२ कात्तिक। तपाईँ पक्कैपनि स्मार्ट फोन प्रयोग गर्नु हुन्छ होइन ? त्यो हो भने फोन तातेर हैरानपनि हुनु हुन्छ होला ? अन्य फोनको तुलनमा स्मार्ट फोन अनेकौं कामका लागि प्रयोग हुने भएकालेपनि यो बढी मात्रामा तात्ने गर्छ । यसरी स्मार्ट फोन तातेमा के गर्ने त ? यो समस्याबाट यसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ :